Yan Aung: ရာဇ၀င်ထဲက မိန်းမသားများ
မြန်မာရာဇ၀င်တွေထဲက အာဂမိန်းမသားများဖြစ်ကြတဲ့ ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပုနဲ့ ဖွားစောတို့အကြောင်းရေးထားတဲ့ ရာဇ၀င်နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းများပါ. ရာဇ၀င်ဆိုတာနဲ့ သမိုင်းကြောင်းကြီးပါဆိုပြီး တော်တော်များများက မဖတ်ချင်ကြပါဘူး. ဒါပေမယ့် ဒီစာအုပ်လေးတွေကတော့ တစ်မူထူးခြားပါတယ်.
ရှင်စောပုကိုတော့ စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုက ရာဇ၀င်ထဲကို ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိသွားသလိုမျိုး ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ပြီးရေးသားထားပါတယ်. ဖွားစောကတော့ Maurice Collis ရဲ့ She Was A Queen ကို ဆရာမြသန်းတင့်က ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာပါ
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသလို ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိလာစေနိုင်တဲ့အထိ ဆရာချစ်ဦးညိုနဲ့ ဆရာမြသန်းတင့်တို့က ပြုစားထားနိုင်ပါတယ်. ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖတ်ရှုအကဲဖြတ်ကြည့်ကြပါတော့ခင်ဗျာ….
thanks for sharing these2books..
You are more than welcome, Demo!
I'm also glad to learn that these books will benefit you in somehow...